🥇 ▷ kanu waa naqshaddaada dhabta ah ✅
kanu waa naqshaddaada dhabta ah
Illaa iyo hadda Xiaomi ayaa bilaabay Redmi note 8 iyo Redmi note 8 Pro. Waxaan horay iyo aad uga wada hadalnay labadan aaladood, marka waa inaan diirada saarno waxa hada imaan doona. Maanta TENAA ayaa daabacay shahaadada Xiaomi Redmi 8A. Qalabkan ayaa loo soo bandhigi karaa inuu yahay ikhtiyaarka ugu dhaqaale ee taxanaha cusub. Waxaan dhowrkii sano ee la soo dhaafay ku aragnay tasiilaadkan mid ka mid ah xulashooyinka ugu jaban iyo aasaaska. Iyagu waa kuwa wareega taas Waxay la yimaadaan kaliya ku filan inay khibrad fiican uhelaan Android iyo qabashada howlaha aasaasiga ah ee nidaamka hawlgalka.
Xiaomi waxay rabtaa inay cusbooneysiiso Redmi 7A oo ku samayn doona aalad cusub oo taxanaha cusub ah. Astaamaha ayaan wali soo bixin, laakiin waxaan rajeyneynaa inaysan ka aheyn adduunka kale. Mana aha qaabkeeda, oo gabi ahaanba lagu sifeeyay TENAA. Shaki kuma jiro, waa qaabeynta rasmiga ah, sida ay xaqiijisay wakaaladda Shiinaha.
Kani waa qaabeynta Xiaomi Redmi 8A ee cusub
Iminka dukaanada Xiaomi the Redmi 7A wuu iibiyaa 99 yuuro. Bari Redmi 8A Waxay ku imaan kartaa qiime aad u lamid ah ama waxyar ka sarreeya noqoshada nooca cusub. Naqshadeedu waxay la mid noqon doontaa Redmi 7A, ilaa mar kale waxay noqon doontaa caag, waxaa ku jiri doona hal dareere oo dhabarka aana yeelan doonno sheybaar sawirka faraha. Waa naqshad aasaasi ah oo diirada lagu saaray awood u lahaanshaha in lagu bixiyo hagaajinta qaybaha gudaha ee kala duwan ee qiimahaan.
Sawirada TENAA si saxda ah looma qiimeeyo, laakiin waxay umuuqataa in Redmi 8A cusub ayaa shaashadda ku imaan doona. Tani waa mid cusub, maadaama Redmi 7A ay ka muuqato waji hore oo leh xayndaab cimri dheer. Waa qodob la door bidaayo, sababtoo ah isla cabirka shirkada gaari kara 5.8 inji halkii laga isticmaali lahaa 5.45 ee Redmi 7A.
Gudaha naqshadda aasaasiga ah ee ‘Redmi’ waxaan ku arki karnaa xariijin dhexe oo siinaysa taabasho aad u soo jiidasho leh. Waxaa la filayaa in ha la imaan USB C, in kasta oo ay wataan qalabka taleefanka madaxa.
Hadda in Xiaomi Redmi 8A Waxaa la caddeeyay inaan filan karno in la soo bandhigi doono toddobaadyada soo socda. Waxay marka hore gaari doontaa Shiinaha iyo laga yaabee inyar ka dib suuqayaga. Qiimaha iyo astaamo badan oo ka mid ah astaamaha wali muu soo bixin, markaa sug.
Via | Sullleaks
Xigasho | TENAA